လက်ချင်းတွဲကာမင်္ဂလာဆွမ်းကျွေးကိုလာတဲ့ ဧည့်သည်တွေကိုကြည်နူးပျော်ရွှင်စွာ ဧည့်ခံနေတဲ့ကျော်ကျော်နဲ့ဆုမြတ်နိုးဦး - Living Myanmar
Homepage / Cele / လက်ချင်းတွဲကာမင်္ဂလာဆွမ်းကျွေးကိုလာတဲ့ ဧည့်သည်တွေကိုကြည်နူးပျော်ရွှင်စွာ ဧည့်ခံနေတဲ့ကျော်ကျော်နဲ့ဆုမြတ်နိုးဦး
လက်ချင်းတွဲကာမင်္ဂလာဆွမ်းကျွေးကိုလာတဲ့ ဧည့်သည်တွေကိုကြည်နူးပျော်ရွှင်စွာ ဧည့်ခံနေတဲ့ကျော်ကျော်နဲ့ဆုမြတ်နိုးဦး
By SummerPosted on June 19, 2020
စကားသံဝဲဝဲလေးနဲ့ ပရိသတျတှရေဲ့ အခစြျတှကေို ရရှိထားသူကတော့ သရုပျဆောငျ မငျးသမီးခြောလေး ဆုမွတျနိုးဦးပဲ ဖွဈပါတယျ။ သူမဟာ ဆယျစုနှဈကြောျတိုငျအောငျ အနုပညာအလုပျတှကေို အောငျမွငျစှာ ကွိုးစားလုပျကိုငျနတောလညျး ဖွဈပါတယျ။ သူမဟာ ဗီဒီယိုဇာတျကားခတျေမှစပွီး ယနေ့ခြိနျထိ ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးတှလေညျး ရိုကျကူးနရေသူ တဈယောကျလညျး ဖွဈပါတယျ။
သူမဟာ သူငယျခငြျးတှဖွေဈတဲ့ ညီထှဋျခေါငျ ၊ကြောျကြောျတို့နဲ့အတူ N- H-K = ဗရမျးဗတာ ဘီအကျဖျအကျဖျမြား ” ဆိုတဲ့ Facebook Page လေး တညျထောငျကာ အခှီဗီဒီယိုလေးတှေ အမွဲတငျဆကျပေးနပွေီး ပရိသတျတှကေလညျး သူတို့ရဲ့ ဗီဒီယိုလေးတှကေို အမွဲအားပေးနကွေတာလညျး ဖွဈပါတယျ။ သူတို့ရဲ့ လှုပျရှားမှုတှကေိုလညျး အမွဲတငျဆကျပေးနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ အခုမှာလညျး ဒီ Page လေးမှာ Live Video. လေးတဈခု တငျထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒါကတော့ ” အခှီ၂ယောကျရဲ့ Aroma wedding studio ရဲ့ဆှမျးကြှေးpackage အသဈကွောျငွာရိုကျကှငျးလေးပါ ” ဆိုပွီး တငျထားတဲ့ ဗီဒီယိုလေးပဲ ဖွဈပါတယျ။ သူတို့နှဈယောကျကိုလညျး ပရိသတျတှကေ အားပေးခစြျခငျနကွေတာလညျး ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျတှလေညျး ကွည့ျရှုခံစားနိုငျအောငျ လကျခငြျးတှဲကာမငျ်ဂလာဆှမျးကြှေးကိုလာတဲ့ ဧည့ျသညျတှကေိုကွညျနူးပြောျရှှငျစှာလိုကျဧည့ျခံနတေဲ့ကြောျကြောျနဲ့ဆုမွတျနိုးဦးရဲ့ ရိုကျကှငျး Video လေးတဈဆင့ျပွနျလညျကူးယူ တငျဆကျပေးလိုကျ ရပါတယျနောျ။
Source : N- H-K = ဗရမျးဗတာ ဘီအကျဖျအကျဖျမြား
စကားသံဝဲဝဲလေးနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တွေကို ရရှိထားသူကတော့ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး ဆုမြတ်နိုးဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ ဆယ်စုနှစ်ကျော်တိုင်အောင် အနုပညာအလုပ်တွေကို အောင်မြင်စွာ ကြိုးစားလုပ်ကိုင်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ ဗီဒီယိုဇာတ်ကားခေတ်မှစပြီး ယနေ့ချိန်ထိ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေလည်း ရိုက်ကူးနေရသူ တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သူမဟာ သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့ ညီထွဋ်ခေါင် ၊ကျော်ကျော်တို့နဲ့အတူ N- H-K = ဗရမ်းဗတာ ဘီအက်ဖ်အက်ဖ်များ ” ဆိုတဲ့ Facebook Page လေး တည်ထောင်ကာ အခွီဗီဒီယိုလေးတွေ အမြဲတင်ဆက်ပေးနေပြီး ပရိသတ်တွေကလည်း သူတို့ရဲ့ ဗီဒီယိုလေးတွေကို အမြဲအားပေးနေကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်း အမြဲတင်ဆက်ပေးနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုမှာလည်း ဒီ Page လေးမှာ Live Video. လေးတစ်ခု တင်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ ” အခွီ၂ယောက်ရဲ့ Aroma wedding studio ရဲ့ဆွမ်းကျွေးpackage အသစ်ကြော်ငြာရိုက်ကွင်းလေးပါ ” ဆိုပြီး တင်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်ကိုလည်း ပရိသတ်တွေက အားပေးချစ်ခင်နေကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေလည်း ကြည့်ရှုခံစားနိုင်အောင် လက်ချင်းတွဲကာမင်္ဂလာဆွမ်းကျွေးကိုလာတဲ့ ဧည့်သည်တွေကိုကြည်နူးပျော်ရွှင်စွာလိုက်ဧည့်ခံနေတဲ့ကျော်ကျော်နဲ့ဆုမြတ်နိုးဦးရဲ့ ရိုက်ကွင်း Video လေးတစ်ဆင့်ပြန်လည်ကူးယူ တင်ဆက်ပေးလိုက် ရပါတယ်နော်။
Source : N- H-K = ဗရမ်းဗတာ ဘီအက်ဖ်အက်ဖ်များ
Posted in CeleTagged လက်ချင်းတွဲကာမင်္ဂလာဆွမ်းကျွေးကိုလာတဲ့ ဧည့်သည်တွေကိုကြည်နူးပျော်ရွှင်စွာ ဧည့်ခံနေတဲ့ကျော်ကျော်နဲ့ဆုမြတ်နိုးဦး
Previous post အမေစုရဲ့ (၇၅)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အတွက် သီးချင်းလေးတစ်ပုဒ်နဲ့ ဂုဏ်ပြုလိုက်တဲ့ မနော
Next post “ဂျီဟောသူ”အတွက် ကိုယ်တိုင်လည်း ရင်ခုန်နေခဲ့တဲ့ မေမီကိုကို